DeltaFosB - အကျိုးအမြတ်အတွက်မော်လီကျူးပြောင်းလဲမှုတစ်ခု (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
vol ။2(2013), အပိုဒ် ID ကို 235651, 11 စာမကျြနှာ
full-စာသား PDF ဖိုင်ရယူရန်
အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Fishberg ဦးစီးဌာနနှင့် Friedman ဦးနှောက် Institute မှ, ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း, တစ်ဦးက Gustave အယ်လ် Levy ရာဌာန, Box ကို 1065, နယူးယောက်, NY 10029, အမေရိကန်နိုင်ငံ
2 နိုဝင်ဘာလ 2012 လက်ခံရရှိ; Revised 10 နိုဝင်ဘာလ 2012; လက်ခံ 20 နိုဝင်ဘာလ 2012
ΔFosBကူးယူအချက်များ၏ Fos မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရှိသမျှသည်အခြားသောမိသားစုဝင်များစူးရှသောလှုံ့ဆော်မှုများဟာ host တုံ့ပြန်လျှင်မြန်စွာပေမယ့်ယာယီသွေးဆောင်နေကြစဉ်တွင်, ဒါဟာကြောင့်၎င်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သောပရိုတိန်းတည်ငြိမ်မှုဖို့ထပ်ခါတလဲလဲဆွတုံ့ပြန်အတွင်းစုဆောင်းသောΔFosBထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ဒေသများအတွင်းရှိ osFosB ကိုထိုသို့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာနှိမ်နင်းခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှု၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင် osFosB သည်ဆုလာဘ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပိုမိုထိရောက်စွာထိုးနှက်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ။ ဤအချက်သည်စွဲလမ်းနေသော ဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးများသောဒေသများတွင် ortFosB အဆင့်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး၊.
တစ်ဦးကူးယူအချက်အဖြစ်, ΔFosBတိကျတဲ့ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့်ဒီအမူအကျင့် phenotype ထုတ်လုပ်သည်။ ကျနော်တို့ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇချဉ်းကပ်၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်အဖြစ်မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ΔFosB၏ထိုကဲ့သို့သောမှတ်တမ်းပစ်မှတ်ဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။ မကြာသေးမှီကအလုပ်အသေးစိတ်မော်လီကျူးΔFosBမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် Synaptic ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် Vivo အတွက်ပစ်မှတ်ဗီဇစကားရပ်ကိုထိန်းညှိပေးသောအားဖြင့်ယန္တယား, အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် delineate မှမျိုးဗီဇမူးယစ်ဆေးဝါး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှာ histones နှင့်အခြားနျူကလီးယားပရိုတိန်း၏ posttranslational ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက် chromatin ပြုပြင်-အပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ထားပါတယ် plasticity ။ ΔFosBဤလေ့လာမှုများဖြစ်နိုင်သောကုထုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသစ်ကပစ်မှတ်တစ်ခုအိမ်ရှင် defining သော, မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏မော်လီကျူးအခြေခံသို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။
Alibhai, TA အစိမ်းရောင်ဂျေအေ Potashkin နှင့် EJ Nestler IN, fosB ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အ fosB mRNA စကားရပ်:? Vivo နှင့်စသည်တို့လေ့လာမှုများအတွက်, ဦးနှောက် Res, 1143 (2007), 22-33 ။
အီးအန်း, et al ဂျေ Chen က P. Zagouras, အိပ်ချ်မဂ္ဂနာ, ဂျေဟော်လန်, အီး Schaeffer, ။ , နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens နျူကလီးယားအချက်-B က၏ induction, ဂျေ Neurochem, 79 (2001), 221-224 ။
အမ် Asanuma နှင့် JL Cadet, striatal အဲန်အက်ဖ်-B ကို DNA ကို-binding လှုပ်ရှားမှုအတွင်းစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်တိုး superoxide dismutase Transgene ကြွက်တွေမှာ attenuated ဖြစ်ပါတယ်, Mol ဦးနှောက် Res, 60 (1998), 305-309 ။
O. Berton, HE Covington 3rd, K. Ebner, မိုင် Tsankova, TL Carl, P. Ulery, et al ။ , စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့် periaqueductal မီးခိုးရောင်သနည်း FosB ၏ induction တက်ကြွဖြေရှင်းတုံ့ပြန်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်, အာရုံခံ, 55 (2007), 289-300 ။
ဂျေအေ Bibb, et al ဂျေ Chen က JR တေလာ, P. Svenningsson, အေ Nishi, GL Snyder, ။ , ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုများအာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်, သဘာဝတရား, 410 (2001), 376-380 ။
ငှက်တစ်ကောင်, ပီဂနြ၏သဘောထားအမြင်, သဘာဝတရား, 447 (2007), 396-398 ။
et al Alibhai, ကို MB Wilkinson, အေ Kumar က, IN TL Carl, yn Ohnishi, YH Ohnishi, ။ , FosB တည်မငြိမ်ဖြစ်စေဘို့ Proteasome-မှီခိုနှင့် -independent ယန္တရားများ:? FosB တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက် FosB degron domains များနှင့်ဂယက်ရိုက်၏ဖော်ထုတ်ခြင်း, EUR J ကို neuroscience, 25 (2007), 3009-3019 ။
ဂျေ Chen ကကို MB Kelz, BT မျှော်လင့်ချက်, Y. Nakabeppu နှင့် EJ Nestler, နာတာရှည် Fos-related antigen: နာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင် FosB ၏တည်ငြိမ်မျိုးကွဲ, ဂျေ neuroscience, 17 (1997), 4933-4941 ။
ဂျေ Chen ကကို MB Kelz, G. အ Zeng, N. Sakai က, C. Steffen, PE Shockett, et al ။ , ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်, ပစ်မှတ်ထားဗီဇစကားရပ်နှင့်အတူ Transgene တိရိစ္ဆာန်များ, Mol Pharmacol, 54 (1998), 495-503 ။
ဂျေ Chen ကအက်စ်အက်စ်နယူတန်, အယ်လ် Zeng, DH ဒမ်, AL Dow, TM အလိုအလျောက် Madsen, et al ။ , FosB Transgene ကြွက်? နှင့် electroconvulsive သိမ်းယူမှုအားဖြင့် CCAAT-Enhancer binding ပရိုတိန်း beta ကို၏ Downregulation, Neuropsychopharmacology, 29 (2004), 23-31 ။
ဂျေ Chen ကသူ Nye, ကို MB Kelz, N. Hiroi, Y. Nakabeppu, BT မျှော်လင့်ချက်, et al ။ , electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ကင်းကုသခွငျးအားဖွငျ့? FosB နှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း, Mol Pharmacol, 48 (1995), 880-889 ။
ဂျေ Chen က Y. Zhang က, ကို MB Kelz, C. Steffen, ES အန်း, အယ်လ် Zeng, et al ။ , နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှုအားဖြင့် hippocampus အတွက် cyclin-မှီခို kinase5၏ induction:? FosB ၏အခန်းကဏ္ဍ, ဂျေ neuroscience, 20 (2000), 8965-8971 ။
CR Colby, K. Whisler, C. Steffen, EJ Nestler နှင့် DW ကိုယ်ပိုင်, လော FosB Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်, ဂျေ neuroscience, 23 (2003), 2488-2493 ။
ဃ Damez-Werno, ဆိုးကျိုး LaPlant, et al အိပ်ချ် Sun က, KN Scobie, DM Dietz, IM Walker က, ။ , မူးယစ်ဆေးအတှေ့အကွုံဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် Fosb ဗီဇသွေးဆောင် primes, ဂျေ neuroscience, 32 (2012), 10267-10272 ။
P. Dobrazanski, T. Noguchi, K. Kovary,, CA Rizzo, PS Lazo နှင့် R. Bravo, အဆိုပါ fosB ဗီဇနှစ်ယောက်စလုံးထုတ်ကုန် FosB နှင့်၎င်း၏အတိုပုံစံ FosB / SF, fibroblasts အတွက်မှတ်တမ်း Active များမှာ, Mol ဆဲလ် Biol, 11 (1991), 5470-5478 ။
ME Ehrlich, ဂျေ Sommer, အီးကာနနှင့် EM Unterwald, Periadolescent ကြွက်တွေကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးတုံ့ပြန်တိုးမြှင်? FosB upregulation ပြသ, ဂျေ neuroscience, 22 (2002), 9155-9159 ။
ဃဖာဂူဆန်, N. နာမည်ကြီးဖုန်းကုမ္မဏီတခုဖြစ်တဲ့, ဂျေ Koo, ဂျေ Feng တို့, V. Vialou, ဃ Dietz, et al ။ , chip-Seq သုံးပြီး Next ကိုမျိုးဆက်အစီအစဉ်စိတ်ခံစားမှု plasticity အတွက် SIRT1 များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြ, အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေး Planner က Program ကိုအမှတ် 778.09, အာရုံကြောသိပ္ပံ, New Orleans, LA က, 2012 များအတွက် Society က။
လေး Graybiel, R. Moratalla နှင့် HA Robertson က ဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့်ကိုကင်း striosome-matrix ကိုအခန်းနှင့် striatum ၏ limbic subdivisions အတွက်က c-fos ဗီဇ၏မူးယစ်ဆေး-တိကျတဲ့ activation သွေးဆောင်, proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 87 (1990), 6912-6916 ။
BA ဘွဲ့ Grueter, AJ Robison, RL Neve, EJ Nestler နှင့် RC Malenka, ? FosB differential နျူကလိယကိုတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း function ကို accumbens modulates, proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (ပေါ်လာဖို့) ။
VL Hedges, အက်စ် Chakravarty, EJ Nestler နှင့် RL Meisel, လောနျူကလိယ accumbens အတွက် FosB overexpression အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ပိုကောင်းစေပါတယ်, Gene ဦးနှောက်ပြုမူနေ, 8 (2009), 442-449 ။
N. Hiroi, JR ဘရောင်း, CN မိုးသီး, အိပ်ချ်ရဲ, ME Greenberg နှင့် EJ Nestler, FosB Mutant ကြွက်များ - Fos နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပရိုတင်းများကိုနာတာရှည်ကိုကင်းများနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ကိုကင်း၏စိတ်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသက်ရောက်မှုများဆုံးရှုံးခြင်း။, proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 94 (1997), 10397-10402 ။
N. Hiroi, GJ Marek, JR ဘရောင်း, et al အိပ်ချ်ရဲ, အက်ဖ် Saudou, VA သို့ Vaidya, ။ , နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှု၏, မော်လီကျူးဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်လုပ်ရပ်များအတွက် fosB ဗီဇ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ, ဂျေ neuroscience, 18 (1998), 6952-6962 ။
ခမျှော်လင့်ချက်, ခ Kosofsky, အရှေ့တောင် Hyman နှင့် EJ Nestler, ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့်နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် binding က AP-1 ၏စည်းမျဉ်း, proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 89 (1992), 5764-5768 ။
BT မျှော်လင့်ချက်, HE Nye, ကို MB Kelz, DW ကိုယ်ပိုင်, MJ Iadarola, Y. Nakabeppu, et al ။ , နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ Fos တူသောပရိုတိန်း၏ရေးစပ်ရှည်-တည်မြဲ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏ induction, အာရုံခံ, 13 (1994), 1235-1244 ။
HJ Jorissen, PG Ulery, အယ်လ်ဟင်နရီ, အက်စ် Gourneni, EJ Nestler နှင့် G. အ Rudenko, Dimerization နှင့်ကူးယူအချက်၏ DNA ကို-binding ဂုဏ်သတ္တိများ? FosB, ဇီဝဓါတုဗေဒ, 46 (2007), 8360-8372 ။
PW Kalivas နှင့်အဲန်ဒီ Volkow, စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ, Am J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု, 162 (2005), 1403-1413 ။
GB ကို Kaplan, ka Leite-မောရစ်, ဒဗလျူဝါသနာရှင်, AJ လူငယ်တို့, နှင့် MD Guy, Opiate ာင်း prefrontal cortical, striatal နှင့် amygdala ဦးနှောက်ဒေသများတွင် FosB /? FosB စကားရပ် induces, PLoS တစ်ခုမှာ,6(2011), e23574 ။
ဂျေအေ Kauer နှင့် RC Malenka, Synaptic plasticity နှင့်စွဲ, နတ်ဗြာ neuroscience, 8 (2007), 844-858 ။
ကို MB Kelz, ဂျေ Chen က Carlezon ဂျူနီယာ, WA, Jr. K. Whisler, အယ်လ် Gilden, Am Beckmann, et al ။ , ကိုကင်းဖို့ဦးနှောက်ထိန်းချုပ်မှု sensitivity ကိုအတွက်ကူးယူအချက်? FosB ၏ expression, သဘာဝတရား, 401 (1999), 272-276 ။
A. အ Kumar က, KH Choi, et al ဒဗလျူ Renthal, မိုင် Tsankova, DE Theobald, HT Truong, ။ , Chromatin ပြုပြင် striatum အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် plasticity အခြေခံအဓိကယန္တရားဖြစ်ပါသည်, အာရုံခံ, 48 (2005), 303-314 ။
ဆိုးကျိုး LaPlant နှင့် EJ Nestler, အဆိုပါ histone ကုဒ် CRACKING: chromatin ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအပေါ်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှု, Horm ပြုမူနေ, 59 (2011), 321-330 ။
KW Lee က, Y. ကင်လေးကင်, K. Helmin, AC အ Nairn နှင့် P. Greengard, နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေး, proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 103 (2006), 3399-3404 ။
ML Lehmann နှင့်အမ် Herkenham, ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်တစ်ခု infralimbic Cortex-မှီခို neuroanatomical လမ်းကြောင်းမှတဆင့်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဖို့စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံပေးအပ်, ဂျေ neuroscience, 31 (2011), 6159-6173 ။
A. အ Levine, Y. Huang က, ခ Drisaldi, EA ၏ Griffin ဂျူနီယာ, DD Pollak, အက်စ် Xu, et al ။ , တစ်ဂိတ်ဝေးမူးယစ်များအတွက် molecular ယန္တရား: ကိုကင်းများကနီကိုတင်းချုပ်ဗီဇစကားရပ်အားဖြင့်အစပျိုးဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများ, သိပ္ပံဘာသာပြန် Med,3(2011), 107ra109 ။
AA ကို Levine, Z. ဂွမ်, အေ Barco, အက်စ် Xu, ER Kandel နှင့် JH Schwartz, CREB-binding ပရိုတိန်းမောက် striatum အတွက် fosB ကမကထမှာ histones acetylating အားဖြင့်ကိုကင်းတုံ့ပြန်ထိန်းချုပ်, proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 102 (2005), 19186-19191 ။
ဂျေလီ, Y. Sun ကများနှင့်ဂျေရဲ, Electroacupuncture ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင် FosB /? FosB အဆင့်ဆင့်၏လျှော့ချရေးနှငျ့ပတျသကျသောအလွန်အကျွံအရက်သောက်သုံးလျော့ကျ, PLoS တစ်ခုမှာ,7(2012), e40347 ။
HF လျူ, WH Zhou, HQ Zhu, MJ လိုင်နှင့် WS Chen က M က၏ Microinjection5 VTA သို့ muscarinic အဲဒီ receptor antisense oligonucleotide FosB အဆိုပါ NAc အတွက်စကားရပ်များနှင့်ဘိန်းဖြူ sensitized ကြွက်များ၏ hippocampus ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, neuroscience Bull, 23 (2007), 1-8 ။
ဗြဲဝင်္, HE Covington 3rd, DM Dietz, ဆိုးကျိုး LaPlant, ဒဗလျူ Renthal, SJ Russo, et al ။ , ကိုကင်း-သွေးဆောင် plasticity အတွက် histone methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ, သိပ္ပံ, 327 (2010), 213-216 ။
, CA McClung နှင့် EJ Nestler, CREB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်? FosB, နတ် neuroscience,6(2003), 1208-1215 ။
, CA McClung, PG Ulery, LI Perrotti, V. Zachary, O. Berton နှင့် EJ Nestler, ? FosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch ကို, Mol ဦးနှောက် Res, 132 (2004), 146-154 ။
ဂျေ McDaid, je Dallimore, AR Mackie နှင့် TC Napier, မော်ဖင်းအကိုက်-sensitized ကြွက်များတွင် accumbal နှင့် pallidal pCREB အတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့် FosB: သနည်း ventral pallidum အတွက်အဲဒီ receptor-evoked electrophysiological အစီအမံတွေနဲ့ဆက်စပ်မှု, Neuropsychopharmacology, 31 (2006), 1212-1226 ။
ဂျေ McDaid, အမတ်ဂရေဟမ်နှင့် TC Napier, စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ာင်း differential သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေကဦးနှောက်၏ limbic circuit ကိုတလျှောက်လုံး pCREB နှင့်? FosB ပွောငျးလဲ, Mol Pharmacol, 70 (2006), 2064-2074 ။
C. Mombereau, အယ်လ် Lhuillier, K. Kaupmann နှင့် JF Cryan, နီကိုတင်း၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ၏ GABAB receptor-positive မော်ဂျူ-သွေးဆောင်ပိတ်ဆို့နျူကလိယ accumbens တစ်လျှော့ချရေးနှင့်ဆက်စပ်သလဲ? FosB စုဆောင်းခြင်း, ဂျေ Pharmacol Exp Ther, 321 (2007), 172-177 ။
R. Moratalla, ခ Elibol, အမ် Vallejo နှင့် AM Graybiel, နာတာရှည်ကင်းကုသမှုနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း striatum အတွက်သွေးဆောင် Fos-ဇွန်ပရိုတိန်း၏စကားရပ်ထဲမှာ Network ကို-Level အပြောင်းအလဲများ, အာရုံခံ, 17 (1996), 147-156 ။
JI မော်ဂန်နှင့် T. Curran, ချက်ချင်း-အစောပိုင်းမျိုးဗီဇ: အပေါ်ဆယျနှစျ, Trends neuroscience, 18 (1995), 66-67 ။
DL Muller နှင့် EM Unterwald, D1 dopamine receptors modulate? ကြွက် striatum အတွက် FosB သော induction ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်, ဂျေ Pharmacol Exp Ther, 314 (2005), 148-154 ။
ဂျေ Muschamp, C. Nemeth, အေ Robison, အီး Nestler နှင့်ဒဗလျူ Carlezon ဂျူနီယာ, အဆိုပါ Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ၏လိုလားသူစိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း? FosB ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ် U50488, Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု, 71 (2012), 44-50 ။
Y. Nakabeppu နှင့်ဃနာသန်, Fos / Jun ကမှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်း FosB ၏တစ်ဦးကသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုပုံစံ, ဆဲလ်, 64 (1991), 751-759 ။
EJ Nestler, ရေရှည် plasticity နောက်ခံစွဲ၏မော်လီကျူးအခြေခံ, နတ်ဗြာ neuroscience,2(2001), 119-128 ။
EJ Nestler, စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ:? FosB ၏အခန်းကဏ္ဍ, ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ, 363 (2008), 3245-3255 ။
EJ Nestler, ကို MB Kelz နှင့်ဂျေ Chen က ? FosB: ရေရှည်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် plasticity တစ်ဦးမော်လီကျူးဖျန်ဖြေ, ဦးနှောက် Res, 835 (1999), 10-17 ။
SD က Norrholm ဂျေအေ Bibb, EJ Nestler, CC ကို Ouimet, JR တေလာနှင့် P. Greengard, နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ကင်း-သွေးဆောင်ပြန့်ပွား cyclin-မှီခို kinase-5 ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်, အာရုံကြောသိပ္ပံ, 116 (2003), 19-22 ။
သူ Nye, B. မျှော်လင့်ချက်, အမ် Kelz, အမ် Iadarola နှင့်အီး Nestler, အဆိုပါ striatum အတွက်ကင်းသဖြင့်နာတာရှည် FOS-related ကိုပဲ induction နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏စည်းမျဉ်းများ Pharmacological လေ့လာမှုများ, ဂျေ Pharmacol Exp Ther, 275 (1995), 1671-1680 ။
သူ Nye နှင့် EJ Nestler, နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာနာတာရှည် Fos-related antigen ၏ induction, Mol Pharmacol, 49 (1996), 636-645 ။
P. Olausson, JD Jentsch, N. Tronson, RL Neve, EJ Nestler နှင့် JR တေလာ, လောနျူကလိယ accumbens အတွက် FosB အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိ, ဂျေ neuroscience, 26 (2006), 9196-9204 ။
MC Peakman, C. Colby, LI Perrotti, P. Tekumalla, T. Carl, P. Ulery, et al ။ , Transgene ကြွက်တွေမှာက c-ဇွန်၏အလွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ Mutant ၏သွေးဆောင်, ဦးနှောက်ဒေသ-တိကျတဲ့စကားရပ်ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေ, ဦးနှောက် Res, 970 (2003), 73-86 ။
LI Perrotti,, CA Bolan ~ os, KH Choi, SJ Russo, အက်စ် Edwards က, PG Ulery, et al ။ , ? FosB psychostimulant ကုသမှုပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ posterior အမြီးအတွက် GABAergic ဆဲလ်လူဦးရေအတွက်စုဆောင်း, EUR J ကို neuroscience, 21 (2005), 2817-2824 ။
LI Perrotti, Y. Hadeishi, PG Ulery, အမ် Barrot, အယ်လ် Monteggia, RS Duman, et al ။ , နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံသနည်း FosB ၏ induction, ဂျေ neuroscience, 24 (2004), 10594-10602 ။
LI Perrotti, RR Weaver, ခ Robison, ဒဗလျူ Renthal, ဗြဲဝင်္, အက်စ် Yazdani, et al ။ , အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ကိုသနည်း FosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ, synapses, 62 (2008), 358-369 ။
EM Pich, SR Pagliusi, အမ် Tessari, ဃ Talabot-Ayer, R. Hooft ဗန် Huijsduijnen နှင့် C. Chiamulera, နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းများ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်ဘုံအာရုံကြောအလွှာ, သိပ္ပံ, 275 (1997), 83-86 ။
KK အိုး, KS Frohmader, V. Vialou, အီး Mouzon, EJ Nestler, MN Lehman, et al ။ , လောနျူကလိယ accumbens အတွက် FosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ဘို့အရေးကြီးသည်, Gene ဦးနှောက်ပြုမူနေ,9(2010), 831-840 ။
ဒဗလျူ Renthal, TL Carl, ဗြဲဝင်္, HE Covington 3rd, HT Truong, ဗြဲ Alibhai, et al ။ , ? FosB နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်က c-fos ဗီဇ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု desensitization mediates, ဂျေ neuroscience, 28 (2008), 7344-7349 ။
ဒဗလျူ Renthal, အေ Kumar က, G. အ Xiao, အမ် Wilkinson, HE Covington 3rd, ဗြဲဝင်္, et al ။ , ကိုကင်းများက chromatin စည်းမျဉ်းများ၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ sirtuins များအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှထုတ်ဖော်ပြသ, အာရုံခံ, 62 (2009), 335-348 ။
ဒဗလျူ Renthal, ဗြဲဝင်္, V. Krishnan, HE Covington 3rd, G. အ Xiao, အေ Kumar က, et al ။ , Histone deacetylase5ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်နာတာရှည်စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထိန်းချုပ်, အာရုံခံ, 56 (2007), 517-529 ။
TE Robinson နဲ့ခ Kolb, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity, Neuropharmacology, 47 (2004), 33-46 ။
AJ Robison နှင့် EJ Nestler, မှတ်တမ်းနှင့်စွဲလမ်း၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား, နတ်ဗြာ neuroscience, 12 (2011), 623-637 ။
AJ Robison, V. Vialou, အမ် Mazei-Robison, et al ဂျေ Feng တို့, အက်စ် Kourrich, အမ် Collins, ။ , အမူအကျင့်များနှင့်နာတာရှည်ကင်းမှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဟာနျူကလိယသနည်း FosB နှင့် CaMKII ပတျသကျတဲ့အစာကျွေးခြင်း-ရှေ့ဆက်ကွင်းဆက် shell ကို accumbens လိုအပ်, ဂျေ neuroscience (ပေါ်လာဖို့) ။
SJ Russo, ကို MB Wilkinson, et al က MS Mazei-Robison, DM Dietz, ဗြဲဝင်္, V. Krishnan, ။ , နျူကလီးယားအချက် B ကိုအချက်ပြအာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်ထိန်းညှိ, ဂျေ neuroscience, 29 (2009), 3529-3537 ။
HJ Shaffer နဲ့ GB ဟေဗာ, အမေရိကန်အမျိုးသား Comorbidity စစ်တမ်းများတွင်ကင်းမှီခိုလက္ခဏာတွေယာယီတိုးတက်မှု, စွဲလမ်း, 97 (2002), 543-554 ။
T. Shippenberg နှင့်ဒဗလျူ Rea, dynorphin ခြင်းဖြင့်မော်ဂျူနှင့် Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonists: ကိုကင်းများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများထိခိုက်မခံတဲ့, Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ, 57 (1997), 449-455 ။
ဂျေတေလာ, ဒဗလျူ Lynch, အိပ်ချ် Sanchez, P. Olausson, အီး Nestler နှင့်ဂျေ Bibb, နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Cdk5 ၏တားစီးကိုကင်းများ၏ locomotor-လှုပ်ရှားမှုနဲ့မက်လုံးပေး-စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်, proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 104 (2007), 4147-4152 ။
SL Teegarden နှင့် TL ဘေးလ်, အစားအသောက် relapse အဘို့အစိတ်ပိုင်းများနှင့်စွန့်စားမှုတိုးလာအစားအသောက် preference ကိုအသီးအနှံအတွက်လျော့နည်းစေ, Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု, 61 (2007), 1021-1029 ။
SL Teegarden, EJ Nestler နှင့် TL ဘေးလ်, ? dopamine အချက်ပြအတွက် FosB-mediated ပွောငျးလဲတစ်အရေးပါတယ်လို့ High-အဆီဓာတ်စာအားဖြင့်ပုံမှန်ရှိပါသည်, Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု, 64 (2008), 941-950 ။
PG Ulery, G. အ Rudenko နှင့် EJ Nestler, phosphorylation ခြင်းဖြင့်လော FosB တည်ငြိမ်မှုစည်းမျဉ်း, ဂျေ neuroscience, 26 (2006), 5131-5142 ။
PG Ulery-Reynolds က, MA Castillo, V. Vialou, SJ Russo နှင့် EJ Nestler, ? FosB ၏ Phosphorylation Vivo အတွက်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှု mediates, အာရုံကြောသိပ္ပံ, 158 (2009), 369-372 ။
V. Vialou, et al ဂျေ Feng တို့, AJ Robison, SM Ku, ဃဖာဂူဆန်, KN Scobie, ။ , သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက်နှင့်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်းနှစ်ဦးစလုံး? FosB ၏ကင်းသော induction ဘို့လိုအပ်သည်, ဂျေ neuroscience, 32 (2012), 7577-7584 ။
V. Vialou, ဗြဲဝင်္, ဒဗလျူ Renthal, QC LaPlant, EL Watts, အီး Mouzon, et al ။ , သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက်? FosB ၏ induction မှတဆင့်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်အားပေးအားမြှောက်, ဂျေ neuroscience, 30 (2010), 14585-14592 ။
V. Vialou, AJ Robison, QC Laplant, HE Covington 3rd, DM Dietz, yn Ohnishi, et al ။ , ? ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်အတွက် FosB စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates, နတ် neuroscience, 13 (2010), 745-752 ။
DL Wallace, V. Vialou, et al အယ်လ် Rios, TL Carl-Florence, အက်စ် Chakravarty, အေ Kumar က, ။ , သဘာဝကဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ်နျူကလိယ accumbens သနည်း FosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဂျေ neuroscience, 28 (2008), 10272-10277 ။
Y. ဝမ်, TI Cesena, Y. Ohnishi, R. ဘာဂါ-Caplan, V. Lam, PD Kirchhoff, et al ။ , အသေးစားမော်လီကျူးစိစစ်ရေးကိုကူးယူအချက်များ၏အားပြိုင်မှုသတ်မှတ်? FosB, ACS Chem neuroscience,3(2012), 546-556 ။
အမ် Werme, C. Messer, အယ်လ် Olson, အယ်လ် Gilden, P. Thorén, EJ Nestler, et al ။ , ? FosB ဘီးပြေးထိန်းညှိ, ဂျေ neuroscience, 22 (2002), 8133-8138 ။
, CA Winstanley, RK Bachtell, DE Theobald, အက်စ် Laali, TA အစိမ်းရောင်, အေ Kumar က, et al ။ , ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းတိုးလာ Impulse: သနည်း orbitofrontal cortex အတွက် FosB များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ, Cereb Cortex, 19 (2009), 435-444 ။
, CA Winstanley, TA အစိမ်းရောင်, DE Theobald, ဒဗလျူ Renthal, ဆိုးကျိုး LaPlant, RJ DiLeone, et al ။ , ? orbitofrontal cortex အတွက် FosB သော induction ကိုကင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု attenuating ရှိနေသော်လည်း locomotor ာင်း potentiates, Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ, 93 (2009), 278-284 ။
, CA Winstanley, ဆိုးကျိုး LaPlant, DE Theobald, TA အစိမ်းရောင်, RK Bachtell, LI Perrotti, et al ။ , ? orbitofrontal cortex အတွက် FosB သော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates, ဂျေ neuroscience, 27 (2007), 10497-10507 ။
ဂျေယန်း, RM ပညာသည်, ဗြဲ Tratner နှင့် IM Verma, FosB တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ spliced ​​ပုံစံ Fos ပရိုတိန်းများကမှတ်တမ်း activation နှင့်အသွင်ပြောင်းတဲ့အနုတ်လက္ခဏာထိန်းညှိဖြစ်ပါသည်, proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 88 (1991), 5077-5081 ။
ST လူငယ်တို့, LJ Porrino နှင့် MJ Iadarola, ကိုကင်း dopaminergic D1 receptors မှတဆင့် striatal က c-fos-immunoreactive ပရိုတိန်း induces, proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်, 88 (1991), 1291-1295 ။
V. Zachary,, CA Bolanos, DE Selley, ဃ Theobald, အမတ် Cassidy, ကို MB Kelz, et al ။ , မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens သနည်း FosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ, နတ် neuroscience,9(2006), 205-211 ။